သင် ဗိုက်နာရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၂ ချက် – Gentleman Magazine
ချောကလက် မစ်ရှိတ်သောက်ပြီး ဗိုက်နာလာတာ ကြုံဖူးပါသလား?? ဝမ်း သုံးရက်လောက် မသွားရတာနဲ့ ဘောလုံးတစ်လုံး မျိုချထားရသလို ပြည့်အောင့်နေပါသလား?? ဝမ်းဗိုက်ပြသနာဆိုတာ မျိုးစုံရှိပြီး ဘယ်ဟာကမှ သက်တောင့်သက်သာ မရှိပါဘူး။ ဝမ်းတစ်လုံးကောင်း ခေါင်းမခဲလို့ စကားပုံ ရှိပါတယ်။ သင် ဗိုက်နာနေရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၂ မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. Stomach Flu
ဒီ ဗိုင်းရပ်ရောဂါဟာ ရောဂါရှိသူတစ်ယောက်က အိမ်သာတက်ပြီးလက်မဆေးပဲ သင် စားမယ့် အစားအသောက်ကို ကိုင်ရင် ဖြစ်မှာပါ။ ဗိုက်အရမ်းနာပြီး ဗိုက် ကြွက်သားတွေ တောင့်လာမှာပါ။ အော့အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ၊ ဝမ်းအရည်တွေသွားတာ၊ အဖျားပျော့ ဖျားတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဖြစ်ခဲ့ရင် အနားယူပါ။ ရေဓာတ် ပြည့်အောင်နေပါ။ ငှက်ပျောသီး၊ ပေါင်မုန့်လို အစားပျော့တွေပဲ စားပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်း ဝမ်းလျောမရပ်ရင်၊ သွေးပါရင်၊ ၁၀၄ ဒီဂရီထက် ပိုပြီး အပြင်းဖျားရင် ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။
၂. Lactose Intolerance
Ice Cream စားပြီး ဗိုက်နာရင် သင့်အစာအိမ်က နို့မှာပါတဲ့ Lactose သကြားဓာတ်ကို မခြေဖျက်နိုင်လို့ပါ။ လူသားတွေရဲ့ ၆၅ ရာနှုန်းဟာ နို့စို့ရွယ်ကျော်သွားရင် Lactose ချေဖျက်နိုင်စွမ်း နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းစားပြီး နာရီဝက်မှ ၂ နာရီလောက်မှာ အိမ်သာတက်ချင်သလို၊ ဗိုက်ထဲက အောင့်လာသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အော့အန်ခြင်း၊ ဖောခြင်း၊ လေလည်ခြင်းတို့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်း အများကြီး မစားပဲ ရှောင်ဖို့ပဲ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
၃. Gall Stones
Gall Stones ဆိုတာ သည်းခြေရည်ကနေ သည်းခြေအိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ကျောက်တုံး သေးသေးလေးတွေပါ။ မိန်းမတွေမှာ အဖြစ်များပြီး အဆီနဲ့ ကိုလက်စထရော ပိုစားတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အပေါ်ညာဘက် ဝမ်းဗိုက်က နာကျင်နေပြီး နာကျင်မှုဟာ ကျောပြင်နဲ့ ပခုံးထိ ပျံ့နှံ့နေမှာပါ။ အော့အန်ခြင်း၊ ညဘက် နာလို့ လန့်နိုးခြင်းမျိုးပါ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
ခဏလေးသာ ဖြစ်ရင်တော့ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရက်သတ္တပါတ် ကြာသည့်တိုင်အောင် အချိန်မှန်မှန် ဖြစ်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ပြောတာပါ။ အမျှင်ဓာတ်ပါတာ အစားနည်းရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ စ်ိတ်ဖိစီးမှု ပျောက်ဆေးတွေနဲ့ အစာအိမ်ဆေးတွေကလဲ ဝမ်းချုပ်စေပါတယ်။ သင် ဝမ်းသွားချင်ပေမယ့် ဘာမှ ထွက်မလာတာ။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ နာနေပြီး ဖောင်းနေတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင် စားသောက်တဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပဲတွေ၊ အသီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများ ထည့်ပေးပါ။ အဲဒါမှမပျောက်ရင်၊ ဗိုက်အောင့်နေရင်၊ သွေးပါရင်၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Ulcer ဆိုတာ သင့်ရဲ့ အစာလမ်းကြောင်းမှာ နာကျင်တာကို ပြောတာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုက နာကျင်တာကို ပိုဆိုးစေပေမယ့် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Ibuprofen နဲ့ Aspirin လို ဆေးမျိုး ခဏခဏသောက်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ မီးတောက်နေသလို ခံစားရတာပါ။
ကော်ဖီ၊ အရက်၊ အစပ်တွေကို ရှောင်ပါ။ Antacid ဆေးတွေလဲ သောက်လို့ရပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ မသက်သာရင်၊ ဝမ်းထဲမှာ သွေးပါရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
၆. Celiac Disease
လူအားလုံးရဲ့ ၁ ရာနှုန်းမှာပဲ Celiac Disease ခေါ်တဲ့ မြင်းစားဂျုံနဲ့ မတည့်တဲ့ ရောဂါ ရှိတာပါ။ ရောဂါရှိသူတွေဟာ သူတို့နဲ့ မတည့်တဲ့ ဂျုံ၊ နှံစားပြောင်း တစ်ခုခုကို စားမိရင် ဗိုက်နာခြင်း အော့အန်ခြင်း၊ ဖောလာခြင်းတို့ကို ခံစားရပါတယ်။ မောပန်းတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ အဆစ်နာတာလို ဝမ်းဗိုက်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သွေးစစ်ကာ ရောဂါရှိတာ သေချာရင်တော့ မတည့်တဲ့ ဂျုံကို ရှောင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၇. Irritable Bowel Syndrome ( IBS )
IBS ဆိုတာ အဖြေမရှိတဲ့၊ ရှင်းမပြနိုင်သေးတဲ့ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု အားလုံးကို သိမ်းကျုံးခေါ်ဆိုလိုက်တာပါ။ အဲဒါမျိုးဖြစ်လာရင် သင့်ဆရာဝန်ဆီ ချက်ခြင်းသွားပြီး တိုင်ပင်ပါ။ သူက ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာသွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Alcohol အလွန်အကျွံ သောက်သုံးတာနဲ့ သည်းခြေကျောက်တွေဟာ ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းတာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်းက နာကျင်နေပြီး နာကျင်မှုက ကျောဘက်ကိုပါ ကူးသွားတတ်ပါတယ်။ အစာ စားပြီးစမှာ ပိုဆိုးပါတယ်။ ထိရင်နာပါတယ်။ အော့အန်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ သူ့ဘာသာ ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပေမယ့် နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် ဆက်တိုက်နာနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ အစားအမာရှောင်ပြီး ဆေးရုံတက်ကာ IV သွင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၉. Gastrorsophogeal Reflux Disease ( GERD )
သင့်အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်ဟာ အစာရေမျိုကို တက်လာရင် GERD ခေါ်တဲ့ ရင်ပူတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရင်အုံမှာ ပူပူကြီး ခံစားနေရတာမျိုးပါ။
စပ်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ပါ။ အကြော်စာ၊ ဆီပူစာတွေ ရှောင်ပါ။ အဲဒါမှ မသက်သာသေးရင်တော့ Antacid တွေ သုံးကြည့်ပါ။ တစ်လလောက်ကြာလို့ ဆေးသောက်နေရတုန်းပဲဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
အသက်လေးဆယ်ကျော်သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အူခွေ အတွင်းနံရံက အိတ်လေးတွေ ရောင်လာလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ အသက်ကြီးခြင်း၊ ဝခြင်း၊ အဆီများ အစားအစာ စားခြင်းတို့ဟာ ရောဂါရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာပါ။
သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆေးစစ်ကြည့်ပါ။ XRay, CT, Ulttasound ရိုက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါပျော့သေးရင် အနားယူဖို့နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးတွေကို ညွှန်ကြားမှာ ဖြစ်ပြီး ရင့်နေရင်တော့ ခွဲစိတ်မှု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အူအတက်ရောင်တာသာ သင့်ရဲ့ အူအတက်ကို ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေက ရောင်ကိုင်းသေရင်၊ ပူပတက်ပ်ိတ်သွားရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ညာဘက် ဝမ်းဗိုက်မှာ ရုတ်တရက် အပြင်းအထန် နာလာတာ၊ လမ်းလျှောက်ရင် ပိုဆိုးတာ၊ ဖျားတာ၊ အော့အန်တာ၊ ဖောတာတွေက အူအတက်ရောင် လက္ခဏာတွေပါ။
အရေးပေါ်ခန်းကို ချက်ခြင်းသွားရမှာဖြစ်ပြီး အူအတက်ကို ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ရမှာပါ။ အူအတက်ပေါက်သွားရင် ဝမ်းဗိုက်ထဲကိုပါပိုးတွေ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
၁၂. Stomach Cancer
အစာအိမ်ကင်ဆာဟာ ဖြစ်တာရှားပြီး အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်မှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရင်ပူသလိုခံစားရရင်၊ ဗိုက်နာရင်၊ ရင်ပြည့်နေရင်၊ အစားအသောက် ပျက်လာရင် အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ နှစ်ပါတ်ထက်ပိုပြီး ကြာကြာ ပြနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး အစာအိမ်ထဲ မှန်ပြောင်းကြည့်ရပါမယ်။ ကုသနည်းကတော့ ကင်ဆာ အနုအရင့်ကို လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုး ရှိမှာပါ။
ခြောကလကျ မဈရှိတျသောကျပွီး ဗိုကျနာလာတာ ကွုံဖူးပါသလား?? ဝမျး သုံးရကျလောကျ မသှားရတာနဲ့ ဘောလုံးတဈလုံး မြိုခထြားရသလို ပွညျ့အောငျ့နပေါသလား?? ဝမျးဗိုကျပွသနာဆိုတာ မြိုးစုံရှိပွီး ဘယျဟာကမှ သကျတောငျ့သကျသာ မရှိပါဘူး။ ဝမျးတဈလုံးကောငျး ခေါငျးမခဲလို့ စကားပုံ ရှိပါတယျ။ သငျ ဗိုကျနာနရေငျ ဖွဈနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျး ၁၂ မြိုးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဒီ ဗိုငျးရပျရောဂါဟာ ရောဂါရှိသူတဈယောကျက အိမျသာတကျပွီးလကျမဆေးပဲ သငျ စားမယျ့ အစားအသောကျကို ကိုငျရငျ ဖွဈမှာပါ။ ဗိုကျအရမျးနာပွီး ဗိုကျ ကွှကျသားတှေ တောငျ့လာမှာပါ။ အော့အနျတာ၊ ဝမျးလြှောတာ၊ ဝမျးအရညျတှသှေားတာ၊ အဖြားပြော့ ဖြားတာတှနေဲ့ သကျဆိုငျနပေါတယျ။
ဖွဈခဲ့ရငျ အနားယူပါ။ ရဓောတျ ပွညျ့အောငျနပေါ။ ငှကျပြောသီး၊ ပေါငျမုနျ့လို အစားပြော့တှပေဲ စားပါ။ ၂၄ နာရီအတှငျး ဝမျးလြောမရပျရငျ၊ သှေးပါရငျ၊ ၁၀၄ ဒီဂရီထကျ ပိုပွီး အပွငျးဖြားရငျ ဆရာဝနျချေါပါ။
Ice Cream စားပွီး ဗိုကျနာရငျ သငျ့အစာအိမျက နို့မှာပါတဲ့ Lactose သကွားဓာတျကို မခွဖေကျြနိုငျလို့ပါ။ လူသားတှရေဲ့ ၆၅ ရာနှုနျးဟာ နို့စို့ရှယျကြျောသှားရငျ Lactose ခဖြေကျြနိုငျစှမျး နညျးသှားတတျပါတယျ။ နို့ထှကျပစ်စညျးစားပွီး နာရီဝကျမှ ၂ နာရီလောကျမှာ အိမျသာတကျခငျြသလို၊ ဗိုကျထဲက အောငျ့လာသလို ဖွဈတတျပါတယျ။ အော့အနျခွငျး၊ ဖောခွငျး၊ လလေညျခွငျးတို့လဲ ဖွဈတတျပါတယျ။ နို့ထှကျပစ်စညျး အမြားကွီး မစားပဲ ရှောငျဖို့ပဲ နညျးလမျးရှိပါတယျ။
Gall Stones ဆိုတာ သညျးခွရေညျကနေ သညျးခွအေိတျထဲမှာ ဖွဈလာတဲ့ ကြောကျတုံး သေးသေးလေးတှပေါ။ မိနျးမတှမှော အဖွဈမြားပွီး အဆီနဲ့ ကိုလကျစထရော ပိုစားတဲ့သူတှမှော ပိုဖွဈတတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အပျေါညာဘကျ ဝမျးဗိုကျက နာကငျြနပွေီး နာကငျြမှုဟာ ကြောပွငျနဲ့ ပခုံးထိ ပြံ့နှံ့နမှောပါ။ အော့အနျခွငျး၊ ညဘကျ နာလို့ လနျ့နိုးခွငျးမြိုးပါ ကွုံတှရေ့မှာပါ။
ခဏလေးသာ ဖွဈရငျတော့ စိုးရိမျစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရကျသတ်တပါတျ ကွာသညျ့တိုငျအောငျ အခြိနျမှနျမှနျ ဖွဈနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ခှဲစိတျကုသဖို့ တိုငျပငျရပါမယျ။
ဝမျးခြုပျခွငျးကို ပွောတာပါ။ အမြှငျဓာတျပါတာ အစားနညျးရငျဖွဈတတျပါတယျ။ တခြို့ ဈိတျဖိစီးမှု ပြောကျဆေးတှနေဲ့ အစာအိမျဆေးတှကေလဲ ဝမျးခြုပျစပေါတယျ။ သငျ ဝမျးသှားခငျြပမေယျ့ ဘာမှ ထှကျမလာတာ။ ဗိုကျအောကျပိုငျးမှာ နာနပွေီး ဖောငျးနတော ဖွဈတတျပါတယျ။
သငျ စားသောကျတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပဲတှေ၊ အသီးတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ မြားမြား ထညျ့ပေးပါ။ အဲဒါမှမပြောကျရငျ၊ ဗိုကျအောငျ့နရေငျ၊ သှေးပါရငျ၊ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကသြှားရငျ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။
Ulcer ဆိုတာ သငျ့ရဲ့ အစာလမျးကွောငျးမှာ နာကငျြတာကို ပွောတာပါ။ စိတျဖိစီးမှုက နာကငျြတာကို ပိုဆိုးစပေမေယျ့ ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ Ibuprofen နဲ့ Aspirin လို ဆေးမြိုး ခဏခဏသောကျရငျလဲ ဖွဈတတျပါတယျ။ အစာအိမျထဲမှာ မီးတောကျနသေလို ခံစားရတာပါ။
ကျောဖီ၊ အရကျ၊ အစပျတှကေို ရှောငျပါ။ Antacid ဆေးတှလေဲ သောကျလို့ရပါတယျ။ တဈရကျနှဈရကျနဲ့ မသကျသာရငျ၊ ဝမျးထဲမှာ သှေးပါရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ပွပါ။
လူအားလုံးရဲ့ ၁ ရာနှုနျးမှာပဲ Celiac Disease ချေါတဲ့ မွငျးစားဂြုံနဲ့ မတညျ့တဲ့ ရောဂါ ရှိတာပါ။ ရောဂါရှိသူတှဟော သူတို့နဲ့ မတညျ့တဲ့ ဂြုံ၊ နှံစားပွောငျး တဈခုခုကို စားမိရငျ ဗိုကျနာခွငျး အော့အနျခွငျး၊ ဖောလာခွငျးတို့ကို ခံစားရပါတယျ။ မောပနျးတာ၊ စိတျဓာတျကတြာ၊ အဆဈနာတာလို ဝမျးဗိုကျနဲ့ မဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှလေဲ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး သှေးစဈကာ ရောဂါရှိတာ သခြောရငျတော့ မတညျ့တဲ့ ဂြုံကို ရှောငျဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
IBS ဆိုတာ အဖွမေရှိတဲ့၊ ရှငျးမပွနိုငျသေးတဲ့ ဝမျးဗိုကျနာကငျြမှု အားလုံးကို သိမျးကြုံးချေါဆိုလိုကျတာပါ။ အဲဒါမြိုးဖွဈလာရငျ သငျ့ဆရာဝနျဆီ ခကျြခွငျးသှားပွီး တိုငျပငျပါ။ သူက ရောဂါလက်ခဏာတှေ သကျသာသှားအောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျပါတယျ။
Alcohol အလှနျအကြှံ သောကျသုံးတာနဲ့ သညျးခွကြေောကျတှဟော ပနျကရိယ ရောငျရမျးတာ ဖွဈစပေါတယျ။ ဝမျးဗိုကျအပျေါပိုငျးက နာကငျြနပွေီး နာကငျြမှုက ကြောဘကျကိုပါ ကူးသှားတတျပါတယျ။ အစာ စားပွီးစမှာ ပိုဆိုးပါတယျ။ ထိရငျနာပါတယျ။ အော့အနျတတျပါတယျ။
တဈခါတဈလမှော သူ့ဘာသာ ပွနျကောငျးသှားတတျပမေယျ့ နာရီအနညျးငယျကွာအောငျ ဆကျတိုကျနာနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ဆကျသှယျပါ။ အစားအမာရှောငျပွီး ဆေးရုံတကျကာ IV သှငျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သငျ့အစာအိမျထဲက အကျဆဈဟာ အစာရမြေိုကို တကျလာရငျ GERD ချေါတဲ့ ရငျပူတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ရငျအုံမှာ ပူပူကွီး ခံစားနရေတာမြိုးပါ။
စပျတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှောငျပါ။ အကွျောစာ၊ ဆီပူစာတှေ ရှောငျပါ။ အဲဒါမှ မသကျသာသေးရငျတော့ Antacid တှေ သုံးကွညျ့ပါ။ တဈလလောကျကွာလို့ ဆေးသောကျနရေတုနျးပဲဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ဆှေးနှေးကွညျ့ပါ။
အသကျလေးဆယျကြျောသူတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အူခှေ အတှငျးနံရံက အိတျလေးတှေ ရောငျလာလို့ ဖွဈရတာပါ။ အသကျကွီးခွငျး၊ ဝခွငျး၊ အဆီမြား အစားအစာ စားခွငျးတို့ဟာ ရောဂါရဲ့ မွဈဖြားခံရာပါ။
သငျ့ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး ဆေးစဈကွညျ့ပါ။ XRay, CT, Ulttasound ရိုကျကွညျ့ဖို့ လိုအပျကောငျးလိုအပျပါလိမျ့မယျ။ ရောဂါပြော့သေးရငျ အနားယူဖို့နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးတှကေို ညှနျကွားမှာ ဖွဈပွီး ရငျ့နရေငျတော့ ခှဲစိတျမှု လိုအပျပါလိမျ့မယျ။
အူအတကျရောငျတာသာ သငျ့ရဲ့ အူအတကျကို ဘကျတီးရီးယား ပိုးမှားတှကေ ရောငျကိုငျးသရေငျ၊ ပူပတကျပျိတျသှားရငျ ဖွဈတတျပါတယျ။ အောကျညာဘကျ ဝမျးဗိုကျမှာ ရုတျတရကျ အပွငျးအထနျ နာလာတာ၊ လမျးလြှောကျရငျ ပိုဆိုးတာ၊ ဖြားတာ၊ အော့အနျတာ၊ ဖောတာတှကေ အူအတကျရောငျ လက်ခဏာတှပေါ။
အရေးပျေါခနျးကို ခကျြခွငျးသှားရမှာဖွဈပွီး အူအတကျကို ခှဲစိတျထုတျပဈရမှာပါ။ အူအတကျပေါကျသှားရငျ ဝမျးဗိုကျထဲကိုပါပိုးတှေ ပြံ့နှံ့သှားနိုငျပါတယျ။
အစာအိမျကငျဆာဟာ ဖွဈတာရှားပွီး အသကျ ၆၅ နှဈကြျောမှ ဖွဈတတျပါတယျ။ ရငျပူသလိုခံစားရရငျ၊ ဗိုကျနာရငျ၊ ရငျပွညျ့နရေငျ၊ အစားအသောကျ ပကျြလာရငျ အစာအိမျကငျဆာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ရောဂါလက်ခဏာတှေ နှဈပါတျထကျပိုပွီး ကွာကွာ ပွနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး အစာအိမျထဲ မှနျပွောငျးကွညျ့ရပါမယျ။ ကုသနညျးကတော့ ကငျဆာ အနုအရငျ့ကို လိုကျပွီး အမြိုးမြိုး ရှိမှာပါ။
Previous: သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အခြားသူတွေအကဲဖြတ်နိုင်သည့် လုပ်ရပ်များ
Next: ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း ၁၀ ခု